Zeyo · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Igama lam ndinguMustafa Elsiddig, owaziwa njengo "Zeyo". Ndingummi waseSudan, ndizalelwe eWad Madani. Ndikhulele eUnited Arab Emirates, eAl-ain. Ndawuthanda umculo werap ndaza ndaqalisa ukuwulandela xa ndandineminyaka eli-16 ubudala.
Kuqala ndandibhala umbongo, kodwa ndandingakuqondi kakuhle ukuhamba kwam. Nangona ndandibuthanda obu bugcisa, kwakungumceli mngeni kum njengoko ndingumntu othintithayo. Kude kube lusuku olunye bendidlala ibethi endiyifumene kwiYouTube ndazama ukuyidlwengula. Kulapho ndafumanisa ukuba ndiyakwazi ukwenza kwaye andikayeki ukusukela ngoko. Kum, umculo yindawo yokuthuthuzela. Ndinobuntwana obunzima kuba ndithintitha, kodwa ndaye ndadlula kuko ngokwenza obu bugcisa. Ndifunde izakhono ezongezelelweyo njengokukwenza ukubetha, ukuhlela ividiyo kunye nokufota.
Ndizama ngako konke okusemandleni am ukuguqula nakuphi na ukungakhathali endijongane nako ndedwa ukuze kuzuze ukukhula kwam. Injongo yam kukubonisa oko mna nabanye sijamelana nako ngenxa yengcinezelo yenkululeko ngelungelo eligqithisileyo, kunye nokuseka iqonga elizweni lam lokunceda amagcisa aguqukayo asokolayo ziimeko zokuphila ezinzima ngenxa yabo urhulumente, akabanga nethamsanqa ngokwaneleyo lokusebenzisa ubugcisa babo.
Kwi-2016, ndibambe indibano yam yokuqala yokufundisa abantwana abaneminyaka eyi-8-13 iziseko zomculo we-rap. Kwakuloo nyaka, uxwebhu olufutshane ngobomi bam lwaphumelela kwindawo yesibini kwiSudan Independent Film Festival. Uthathe inxaxheba nakwi-Insburk Film Festival.
Kwi-2019 ndathatha inxaxheba kwiworkshop yomculo "Yalla Khartoum", eyasungula unxibelelwano phakathi kweemvumi ezininzi ezisakhulayo * neentlobo ezahlukeneyo. Le ndibano yocweyo yayisegameni loxolo eSudan kwaye yayijolise ekunxibelelaniseni zonke izizwe zaseSudan ngomculo.
Ekuqaleni kwenguquko eSudan eyaqala ngoDisemba 2018, senza ingoma ngalo msitho kwaye ingoma yaba yingoma edumileyo ezitratweni.
- UZoyo, eBerlin, ngo-2021.
YouTube: @Ishishini loSapho
SoundCloud: @Zeyo umntu